पानी–पुरी, चाट ! ‘अमिलो–पिरो ट्वाक्क’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / पानी–पुरी, चाट ! ‘अमिलो–पिरो ट्वाक्क’
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार February 11, 2019	0 91 Views
ट्वाक्क। यही स्वाद लिन पारखीले चाट र पानीपुरी रोज्ने गरेका छन्। बाटैमा उभिएर चाट र पानीपुरी खाने धेरै भेटिन्छन्। यो यस् तो परिकार हो, घरको भान्सा कोठामा भन्दा पनि सडकमै खान रुचाउने बढी हुन्छन्।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डस् िथत लमही बजारमा पाइने चाट र पानीपुरीको स्वाद लिन पारखीहरु टाढा–टाढाबाट आउने गर्छन्। थोरै पैसामा पाइने र मिठो पनि उत्तिकै हुने भएकोले अधिकांश युवायुवतीलगायत सबैको रोजाइमा चाट र पानीपुरी पर्छ।
त्यसैले त, घरभित्र डाइनिङ टेबलमा बसेर मात्रै खाना खानेहरुसमेत बाटोमै उभिएर नास् ताको रुपमा चाट वा पानीपुरी खाइरहेका भेटिन्छन्। ठूला–ठूला होटल र लजमा बसी महङ्गा परिकार खाने व्यक्तिलाई पनि आकर्षित गरिरहेको हुन्छ, बाटोघाटोमा राखिएका चाट र पानीपुरीले। दाङका बजारका चोक÷चोक, कुना तथा बाटो छेउमा यस् ता थुप्रै चाट पसलहरु सञ्चालनमा आएका देखिन्छन्। कतिपयले भने घरमा वा कोठा भाडामा लिएर ब्यवस् िथतरुपमा यो व्यवसाय गर्दै आएका छन्। तर अधिकांश चाट व्यापारीहरु ठेलामै चाट र पानीपुरी घुमाइरहेका भेटिन्छन्।
यही मध्येका एक विष्णु जैसवालले लमहीमा पानी पुरी र चाटको ब्यापार गर्न थालेको १३ वर्ष भयो। यो अवधिमा उहाले धेरै नियमित ग्राहक भेटाउनु भयो। ‘लमहीमा पाइने पानीपुरी र चाटको टेस् ट अन्न पाइदैन भनेर खोजी–खोजी आउछन्’– उहाले भन्नुभयो– ‘अमिलो, पिरो मन पराउनेहरु चाट र पानीपुरी रोज्छन्।’ उहाको पाचजनाको परिवार यही व्यवसायबाट धानिएको छ।
‘धन कमाउन विदेश जानैपर्छ भन्ने छैन। चाट, पानीपुरी बेचेर परिवार धानेको छु’– उहाले भन्नुभयो– ‘काम, सानो ठूलो हुन्न, मान्छेको सोचाई चाहि सानो ठूलो हुन्छ।’ बसपार्कमा आधा दर्जन चाट व्यवसायी छन्। सटरमा पसल गर्ने पनि उत्तिकै छन्। सटरमा दिउ“सो ३ बजेपछि पारखीको भीडनै लाग्छ। वसपार्कमा राखिएका ठेलामा यात्रुको रोजाइ हुन्छ।
चाट व्यवसाय राम्रै भए पनि नगरपालिकाले दुःख दिने गरेको व्यवसायीले गुनासो गर्छन्। बसपार्कमा लामो दूरीका सवारी साधन कमै पस् छन्। जसले गर्दा उनीहरुको व्यापारमा मन्दी आएको छ। ‘नगरपालिकाले ध्यान दिन्छौं भने तर अहिले फर्किएर आएका छैनन्’– मुकेश सोनीले भन्नुभयो– ‘वसपार्कमा गाडी पस् नुप¥यो।’
Previous: मानव बेचविखन रोक्ने दायित्व
Next: आधारभूत विद्यालय स्थानीय सरकारको दायित्वः देवकोटा